समाजवादी पार्टीसँग किन भयो ओलीको ‘ब्रेकअप’ ? | Ratopati
समाजवादी पार्टीसँग किन भयो ओलीको ‘ब्रेकअप’ ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeपुस ४, २०७६ chat_bubble_outline0
यसरी एउटा दलले शीर्ष तहको नेता राखेर वार्ता समिति गठन गरेको नेपाली राजनीतिमा पहिलो घटना हो । यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि समाजवादी पार्टीले वार्ता र संवादलाई कति महत्त्व दिएको छ । तर समितिले वार्ताका लागि प्र्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट अझैसम्म केही ‘सिङ्गल’ पाएको छैन ।
पार्टीका महासचिव गङ्गा श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले वार्ता समिति गठन गरेको कुरा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइसके पनि तर हालसम्म कुनै रेसपोन्स आएको छैन ।
अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी छ । तैपनि सरकारको नेतृत्व गरेका दलसँग वार्ता हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री आली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा उपेन्द्र यादव भएपनि दुवैजनाको बीचमा भेटघाट नभएको महिनौँ भइसक्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफल गर्न पटक–पटक टाइम माग गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अस्वस्थताको कारण देखाउँदै त्यसलाई टार्ने काम भइरहेको छ ।
नेकपाका एकजना स्थायी समिति सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘उपेन्द्र यादव पनि सरकार छाड्न चाहनुहुन्छ । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले हतार नगर्न भनेको कारण मात्र उहाँ टिकिरहनु भएको छ । तर त्यसरी कतिदिनसम्म टिक्नुहुन्छ थाह छैन ।’
#समाजवादी पार्टी#नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)